ီDriver | Golden Ivy Co.,Ltd ﻿
31.1.2019, Full time , Technology
Company: Golden Ivy Co.,Ltd
•	အသက် (၂၅) နှစ်မှ (၃၀) ၀န်းကျင်ဖြစ်ရမည်။
•	လိုင်စင်အနက် (သို့) အညိုဖြစ်ရမည်။
Work location အမှတ်(၂၁၉), သစ္စာလမ်းမကြီး, (၁၃)ရပ်ကွက်, သံလမ်းမှတ်တိုင်အနီး, ရန်ကင်းမြို့နယ်, ရန်ကုန်မြို့။
Company Industry: Driver
95 Days, Full time , Technology
•	Store စာရင်းပိုင်းနားလည်တက်ကျွမ်းသူ ဖြစ်ရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
Site QA/AC Engineer
99 Days, Full time , Technology
•	ပုသိမ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ •	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုသူဖြစ်ရမည်။
•	ပုသိမ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ •	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုသူဖြစ်ရမည်။ •	(Civil)
264 Days, Full time , Technology
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုသူဖြစ်ရမည်။ Project Engineer (Civil)
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုသူဖြစ်ရမည်။ (Civil)
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုသူဖြစ်ရမည်။
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုသူဖြစ်ရမည်။ Senior Engineer (QS)
293 Days, Full time , Technology
Driver Driver, Security & Cleaning jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Golden Ivy Co.,Ltd Driver, Security & Cleaning jobs Driver, Security & Cleaning jobs Driver Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Want to work in Taunggyi? Find the best jobs in Myanmar at www.jobless.com.mm
Standard Of Future Co., Ltd.
Marrybrown Myanmar Co., Ltd.
Yoma Nadi Co.,Ltd
Golden Elite Co.,Ltd.
Yangon (Rangoon) 137 Days
Yangon (Rangoon) 139 Days